Aavashare.comမှပေးအပ်မယ့် Samsung Galaxy Tab A6 ကံထူးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေး.......
ကျွန်တော်တို့ Aavashare ရဲ့ Lucky draw အစီအစဉ်မှ Grand Prize ကံထူးဖို့အခွင့်အရေး ကိုအခုပဲပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ပါပြီ။
(ယခင်ကျွန်တော်တို့ (၂၊၄၊၂၀၁၇)မှာ ကံထူးရှင်ရွေးချယ်ဖို့ သတ်မှတ်ထားပေမယ့်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Userအသစ်တွေ၊မိသားစုဝင်အသစ်တွေနဲ့၊လက်ရှိကံစမ်းထားသူများရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေပါ ဆက်လက်ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ဖို့ ကံထူးရှင်ကြေငြာမယ့် နေ့ရက်ကို ၉၊၄၊၂၀၁၇သို့ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။)
Login ဝင်ပါ၊Comment ရေးပါ ပြီးတော့ နံပါတ်စဉ်တပ်ပေးပါ။Grand Prize Lucky Draw ကံထူးရှင်ကိုတော့ ၉.၄.၂၀၁၇မှာကြေငြာပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကံစမ်းကာလအချိန်ကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ပေးထားတာဖြစ်တာကြေညင့်ကံထူးဖို့အခွင့်အရေးပိုမိုများပြားနိုင်ပြီပေါ့။ဒါကြောင့်အခုပဲမြန်မြန်စည်းကမ်းချက်အတိုင်းကံစမ်းလိုက်ရအောင်ပါ 😉
✨✨The Grand Prize: SAMSUNG Galaxy Tab A6 Tablet✨✨
💫💫အခြားနှစ်သိမ့်ဆုများ : ၁၀၀၀၀တန်ငွေဖြည့်ကဒ် ၅ကဒ်💫💫
1.သင့်ရဲ့ Facebook ဒါမှမဟုတ် Google accountကနေ www.aavashare.com မှာLogin ဝင်နိုင်ပါတယ်။
2."WinaTablet with Aavashare.com, Myanmar Social Media & Blogger App"ဆိုတဲ့Blogကိုဝင်ပါ/နှိပ်ပါ။
3. ၎င်းBlog အား Rateလုပ်ပြီး၊ သင့်Facebook wall မှာ "#aavashare" ဟုရေး၍ Shareပါ။
4. မူရင်း blog၏ comment တွင် နံပါတ်စဉ်တပ်ပြီး "#i love aavashare" ဟု comment ရေးပါ။
ဥပမာ သင့်ရဲ့အရှေ့က ကံစမ်းသူမှ 46#iloveaavashare ဟုရေးထားလျှင်၊ သင့်အလှည့်တွင် 47#iloveaavashare ဟု အစဉ်လိုက်ရေးပေးရပါမည်။***
💥💥Terms & Condition💥💥
1. Aavashare ရဲ့ ဝန်ထမ်းများမှအပ အခြားသောသူများ ပါဝင်ကံစမ်းနိုင်ပါသည်။
2. ကံစမ်းသူအားလုံးဟာ အပေါ်မှာညွှန်ပြထားတဲ့အဆင့်အားလုံး ပြီးမြောက်အောင် ပြုလုပ်ရပါမယ်။Facebook တွင် Share သောအခါတွင်လဲ #aavashare အားထည့်သွင်းရေးသားရန် မမေ့ပါနှင့်။
3. ကံထူးသူအား Aavashare site သင့်email or mobile နဲ့ ကျွန်တော်တို့ Aavashare Facebook page တို့မှ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားပေးသွားပါမည်။
4. ကံထူးသူသည် ၁၄ရက်အတွင်း ဆုရယူနိုင်ရန် ကျွန်တော်တို့အား ဆက်သွယ်ရပါမည်။ကံထူးသူအား ကျွန်တော်တို့ Aavashareမှလဲ ၃ကြိမ် ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပါမည်။
5. ကံထူးရှင်သည်ဆုပေးပွဲတွင် မလာရောက်နိုင်လျှင် ကံစမ်းထားသူများထဲမှ တစ်ယောက်အား ထပ်မံရွေးချယ် ဆုပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
7. ဆုထုတ်ယူသောအခါတွင် ခိုင်လုံသောသက်သေအထောက်အထားပြနိုင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
8.ဆုပေးပွဲကျင်းပမည့်ရက်တွင် လုံလောက်သော ကံစမ်းသူမရှိပါက ကံစမ်းကာလအား အကန့်အသတ်မရှိ တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
9. အကယ်၍ အငြင်းပွားဖွယ် တစ်စုံတစ်ရာရှိခဲ့ပါလျှင် တာဝန်ရှိသူများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသာ အတည်ပြုပါမည်။
POST here, have FUN, SHARE with your friends